Unyango lwasekhaya lwePuppy Parvo - Inja Impilo
Unyango lwasekhaya lwePuppy Parvo
I-Canine parvovirus sisifo esosulelayo esosasazwayo yimeko yelindle. Abantu, izilwanyana kunye nezinto ezingaphiliyo zinokusasaza intsholongwane ukuba azicocekanga kakuhle emva kokudibana nesi sifo. Ukuba ishiywe inganyangwa,iparvo iyabulala, ngakumbi iinjana. Ukhathalelo lokuqala lwezilwanyana lubalulekile kwinja eneparvo, kodwa kukho iindlela zokugcina iindleko zonyango lweeparvo phantsi ngokunika ukhathalelo olulandelayo ekhaya.
Ukuba inja yakho inempawu zeparvo, kufuneka ingqalelo yezilwanyana kwangoko.
Iimpawu eziqhelekileyo zibandakanya:
Urhudo (kakhulu, ligazi- mhlawumbi ngevumba lesinyithi)
Ukwehla kobunzima obubonakalayo
Intlungu okanye ukungaphatheki kakuhle
Ugqirha wezilwanyana uya kukuqhuba kuvavanyo lweparvo kwaye uza kutsala igazi ujonge ubungakanani begazi leeseli lakho elimhlophe. Ukuba iziphumo zilungile kwiparvo, iyeza lokubulala iintsholongwane, kunye nolwelo olungena ngaphantsi okanye ngaphakathiilawulwa unyango. Amayeza okunyanga isicaphucaphu nawo anokumiselwa.
Qhubeka nokunyanga iParvo ekhaya
Ugqirha wezilwanyana uya kukucebisa ukuba ugcine inja yakho ikhwele kwindawo yabo kulandela unyango lokuqala lweparvo, ukuze afumane ukhathalelo lweyure ezingama-24. Nangona olu luvo olulungileyo, lunokubiza amakhulu amawaka ukuya kwiidola. Endaweni yokuyilalisa esibhedlele inja yakho de ibe iphilile, unendlela yokuzisa inja ekhaya emva kokuqeshwa kwayo kugcinwa iindleko.
Ukuba ukhetha ukuzisa inja yakho ekhaya ukuze iqhubeke nokunakekelwa, kufuneka uyibukele ubusuku nemini.
Ukuba iimpawu zakhe zibonakala zisiba mandundu okanye ziba rhoqo, kuya kufuneka ubuyise inja yakho kwi-vet yakho kwangoko ukuze ufumane unyango.
Ukuba unezinye izilwanyana ezifuywayo, kungcono ukuyihlukanisa yedwa inja yakho egulayo kwigumbi elinye ukugcina abanye ekufumaneni iparvo okanye ukuphatha intsholongwane iye kwenye indawo.
Ukuhambisa amanzi kubalulekile
Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni ngoyena nobangela uqhelekileyoukufa kwenjangeparvo, ukugcina inja yakho rhoqo ifumana amanzi kuya kubalulekile.
Buza ugqirha wezilwanyana malunga Ikhithi engamanzi engaphantsi kwe-Q ukuzisa ekhaya kunye naye ukuze akubonise indlela yokuhambisa ulwelo. Buza ukuba inja yakho kufuneka ifumane kangaphi la manzi, ngenxa yoko uyigcina ilungile.
I-electrolyte yenja yakho iya kupheliswa. Unokulawula ngokungxenga I-Pedialyte ngokuyifaka emanzini enja yakho. Oku kuya kunceda ukuzalisa ii-electrolyte. Nxibelelana nogqirha wezilwanyana malunga nedosi efanelekileyo yePedialyte yenja yakho.
Yazisa ngokutya kancinci
Xa inja yakho ibuthathaka kakhulu okanye ikhathaza kakhulu ukuba ungatya, ungaguqukela kwizongezo ezinje Ingxelo yeNutri ngaphantsi kwe- $ 6, kwaye umtyise iidosi ezincinci ngexesha. Ikhalori ephezulu, ivithamini epakishwe izongezo kwiidosi ezincinci kuya kuba lula kakhulu ukuba inja yakho ithathe ngaphandle kokutya isidlo sayo esiqhelekileyo. Ugqirha wezilwanyana uGqirha Jeff Werber ucebisa ukuba kusetyenziswe inkukhu, inyama yenkomo okanye ukutya okunencasa yabantwana e-turkey ukuze kulukuhlwe injana ukuba itye. Ukwacebisa ukutya okunekhalori ephezulu njengokutya Intaba a / d yenzelwe izinja ezichacha kutyando.
Nje ukuba inja yakho iyeke ukugabha kwaye kubonakala ngathi ifumana amandla amancinci, mlukuhle ngokutya okumanzi ukuze ubone ukuba uza kuqala na ukutya.
Nika kuphela izahlulo ezincinci ngexesha ukuze angaphindi aqale ukugabha kwakhona ekutyeni ngokukhawuleza kakhulu.
Nje ukuba inja yakho iqale ukutya rhoqo kwakhona, ingaqala ukubuyisa amandla ayo.
Ezinye izongezo zokutya zinokuba luncedo kumntwana wakho ekulweni iparvo, kodwa ayilulo endaweni yonyango lwezilwanyana. Baxhasa ukubuyela kwimeko yesiqhelo.
Izikhupha zamaqanda azinakho ukubonelela ngeeprotheyini ukunceda injana yakho igcine ubunzima bayo, ikwabonakalisiwe ukuxhasa amajoni omzimba wezinja ezineparvo.
I-Apple cider viniga iye yazi i-antibacterial kunye ne-anti-inflammatory iipropati.
IntengoIiprobiotic zenzelwe izinjaInkxaso yamajoni omzimba.
Uncediso lweoyile yeentlanzi luyaziwa kwakhona Xhasa amajoni omzimba wenja .
Isilivere yeColloidalinxulunyaniswa nokuncedisa abantu nezilwanyana kunye nezifo ezivela kwizifo. Isilivere ithintela iintsholongwane kwiintsholongwane, indlala intsholongwane kwaye ibangele ukuba ife, enokuthi ibuyise inja yakho ngokukhawuleza. Izixhasi zingathengwa nge IAmazon okanye kwivenkile yokutya esempilweni yakho eyi- $ 18.
Ungaze unike nayiphi naUnyango lwe-homeopathickwizilwanyana zasekhaya ngaphambi kokuba uthethe nogqirha wezilwanyana. Mbuze malunga nomthamo ofanelekileyo, ukuba unamava wokusebenzisa olu nyango lweparvo, kwaye ukuba ucinga ukuba iyeza le-homeopathic lilungele ukusetyenziswa kwinja yakho, ngakumbi ngokudibanisa nayiphi nai-antibiotics ayichazayo.
Ngelixa abanye abanini bezinja bekhetha ukunyanga inja yabo ekhaya ngaphandle kokusebenza nogqirha wezilwanyana, awungekhe ungene eWalmart okanye ePetco kwaye uthenge unyango lwe-parvo lokuthenga izinja. Amayeza ayilelwe ukunyanga iparvo, njengeyeza lokuthintela isicaphucaphu, onke afumaneka ngugqirha kuphela. Akufanele unike inja yakho naluphi na amayeza e-OTC kurhudo njengoko oku kunokusebenza ngokuchasene nesi sifo. NgokukaGqirha Werber, intsholongwane iyaphalala kurhudo kwaye kufuneka uvumele urhudo ukuba luqhubeke ngelixa uxhasa injana ngokunika ulwelo oluninzi ukugubungela abo balahlekayo ngenxa yokugula.
Amaqhekeza amancinanana amdaka avela kwinja yakho eyosulelekileyo aya kusasazeka, ke ngoko kubaluleke kakhulu ukucoca nayiphi na indawo inja yakho edibene nayo isebenzisa iblitshi. Ukuba uthe wadibana nale ntsholongwane kwaye awuzicoci ngokufanelekileyo okanye umphezulu ehleli kuwo, ungayisasaza intsholongwane kwezinye izinja ngokuzichukumisa okanye ngokuhamba phandle usulele umhlaba kwizihlangu zakho. Sebenzisa iiglavu zelatex kunye neziciko zezihlangu ezilahlwayo xa uphethe inja yakho kuya kunceda ukugcina usulelo lusasazeka.
Nje ukuba ukholelwe ukuba inja yakho ayinasifo, kuya kufuneka uyibuyisele kwi-vet yakho ukuze ikutshekishe. Ugqirha wezilwanyana uyakucebisa ukuba usulelo lumkile na kwaye ngaba ulwelo oluninzi luyacetyiswa. IParvo ithatha izinja, ngenxa yoko isenokungabuyeli kwimo yesiqhelo okwethutyana. Ugqirha wezilwanyana unokwenza izindululo zokuqhubeka nokuhlolwa kwaye xa inja yakho ikulungele ukufumana iyeza lokugonya iparvo ukuthintela ukuqhambuka ngakumbi.
Jonga ukuphinda kwenzeke kwakhona
Intsholongwane yeparvo inokuhlala kwiindawo ezininzi ze ukuya kunyaka omnye . Ukuba inja yakho iqala ukubonisa iimpawu zeparvo kwakhona, mbuyisele kugqirha wezilwanyana kwangoko.
Olona khuselo lubalaseleyo kwi-parvo kukugcina intsholongwane ingangeni ekhayeni lakho. Ukuba inja yakho ineeveki ezintandathu ubuncinci ubudala, kufuneka inikweiparvo shotngokonyusa okulandelayo kwiiveki ezintathu neeveki ezintandathu emva kogonyo lokuqala. Ukuba inja yakho ayigonyelwanga iparvo kwaye yadibana nenja esulelwe yiparvo okanye iqala ukubonisa iimpawu zesi sifo, funa unyango lwezilwanyana kwangoko.
Ifoto Contests And Careers Iikholeji Imiboniso Bhanyabhanya Iindidi Ze Ukuzivocavoca Amakhandlela Imiboniso Yesilayidi Indlu Cleaning Tips
ukuba wenzeni ngolwimi lwakho xa uncamisa
njana zitya nini ukutya okuqinileyo
bubuphi ubungakanani obukhulu ngakumbi kwiingubo zabafazi
owenza umbulelo iholide yesizwe
kunye nabasetyhini abanenwele ezimfutshane